Date My Pet » Ko iye Kutamba With You? Tarisa Out For Zviratidzo izvi!
Last updated: Sep. 24 2020 | 3 Maminitsi verenga
Une mukomana uchifarira asi havana chokwadi manzwiro ake? Ever akawana pachako kushamisika zvazvinoreva kana anoita zvimwe zvinhu kana anoita chimwe nzira? Ever akanetseka ndeupi zviratidzo izvi unofanira kutsvaka kuziva kana iye zvechokwadi kutamba newe?
Kana akapindura kutsigira dzemibvunzo zvose izvi, ipapo zvimwe unoda mazano mashoma kukubatsira nechikepe kuburikidza uye uzive kana achinyara mauri.
Anoramba ziso kuonana?
Kana mukomana uchitaura anoramba ziso kuonana nokuda kwenguva yakareba, ipapo kuti aigona kuva chiratidzo chokuti uchifarira kwamuri. zvisinei, nyara vakomana vanogona kuchengeta ziso kuonana, kunyange kwenguva pfupi nguva.
Akanga kuti tsuka meso?
Regai aendese anonyara Guy sezvo chisingasvikiki. Kana blushes pose muri kumativi, ipapo zano rako utange kukurukura uye kubatsira mukomana kunze sezvo aigona kufa kutaura nemi. Kunyange varume vasiri vanonyara, kutsvuka kumeso ari Zvechokwadi chiratidzo chakanaka chokuti dzisinganyatsooneki kuchiratidza ake kufarira mamuri.
Ko tsinga ake kutora pamusoro?
Ever nei uyo nguva dzose sokuti mutizi apo vakakupoteredza? tsime, dzimwe nguva kuva nokuti anoda kusiya. Avo vanongova tsinga ake kutora pamusoro sezvo anoedza kupfupikisa ushingi kutaura nemi.
Vari vake tsiye dzake akamutswa?
Kunyange zvazvo mukomana anogona kuti kuedza kuvanza maziso ake ari kufarira mamuri pamunenge muchitaura, kana akasimudza ake tsiye dzake vane wakashamira maziso, Saka kuti chiratidzo chokuti ari kutamba newe.
Ko iye ari copycat?
Iri rinonakidza chaizvo chokwadi. Kana ari kutamba newe, achaita mukusaziva kutevedzera zvauri kuita. Wati wambocherechedza kuti pose watama ruoko rwako kuburikidza bvudzi rako, rwake runoita kuti bvudzi rake zvakare? Kana kunyange paunenge idzokere gumbo rako, iye anodarowo? Ndicho mashiripiti pamusoro kunyepedzera uye izvi ndezvimwe zviratidzo zvaunofanira utsvake.
Ko iye kuteura musoro wake?
Wati wambocherechedza kuti mukomana tilting musoro wake akananga sezvaunoshandisa kutaura naye? Zvinoreva zvaanoda here uye ari kutarisa, kuti arege kurasikirwa nechinhu yauri kutaura.
Pane kunyemwerera achitamba pamiromo yake?
A mukomana kuti anokuda iwe uchava kunyemwerera iwe sechiratidzo chokuti anoda kutaura newe. saka, tora ive kukoka kutanga kukurukura.
Ko iye kumira akimbo?
A mukomana uyo uchifarira uchaedza kukuratidza ivo nechivimbo kuburikidza amire nemaoko akaisa pamusoro muhudyu, kana kunyange thumb raizoiswa zvishwe bhandi rake. chiratidzo ichi kungasava pachena, asi zvinogona kuita senhungamiro.
Ko vevaanodzidzisa rakawedzerwa?
Maiziva here kuti kana uchida mumwe munhu, vadzidzi venyu kurisa uye kana musingakangamwiri, ivo chibvumirano? Tichifunga izvi, zvose zvaunofanira kuita kutarisa meso ake sezvo uine kukurukura. Kana ivo vakurise, unozoziva anofarira.
Ko iye chete ndikupurudzire?
Ko mukomana nokusingaperi kukupai nyoro chingakubata, kunyange sezvo iye akapfuura? Ipapo ndechimwe kufarira iwe uye anoda kuti andobata mufunge. zvisinei, muchenjerere vaya zvinokambaira vari, tsime, chete zvinokambaira vanoda kutamba famba muukama. Munoziva zvandinoreva, here?
Sezvo iwe ikozvino kunzwisisa zviratidzo kutarira kuti pakarepo kuziva kana ari kutamba newe, inguva kutora nzombe nenyanga. Usarega mukana kupfuura imi nokuda!